နာမည်လေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » နာမည်လေးများ	14
Posted by manawphyulay on Mar 6, 2015 in Photography | 14 comments
မြစပဲရိုး says: သများ ကျန်သေးတယ် မနော လေး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: မြစပဲရိုးကို အင်ဂါလိတ်လို့ ဘယ်လိုပေါင်းလဲ အဲလို လုပ်မှ လှတာမို့နော်
မြစပဲရိုး says: Emerald Sparrow …
Thanks my love. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: ကဲ မြစပဲရိုးအတွက် နှစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့အရောင်ကာလာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Wow says: ဟယ်… နာလေးကလှသားပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
တောင်ပေါ်သား says: ရေးးးးးးးးး မိုက် မိုက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: သများ နာမည် pooch မှာ c ကျန်နေတယ်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: sorry ပြင်ပေးမယ်နော်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဒါ ဒစ်ခွင်မနေးရှင်း ဘဲ
manawphyulay says: အဲလို ဟုတ်ပါဘူးနော်… ကြိုက်တာ ပြော ထပ်လုပ်ပေးမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ပထမ ပို့စ်ကို မမြင်မိလို့ နာမည် မတွေ့လို့ ဒစ်ခွင်င်မနိတ် လို့ အော်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: ဒီဇိုင်းလေးတွေ လှလိုက်တာ…
စာအုပ်ကြီး ကြည့်ပြီး ကလိကြည့်ဦးမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: လှတယ်။
ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့သူလည်း လှမှာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.